Abadlali bakutholile akade bekudinga kumdlalo wokugcina wamalungiselelo – u-Gwavu
i-Coca-Cola South Africa U19 iqedile ngomdlalo wayo wokugcina wokulungiselela ngaphambi kokuthi bahambe baye kwi-ICC U19 World Cup e-New Zealand e-Tuks Oval ngoLwesithathu. Labadlali abancane bahlulwe ngama-wicket amahlanu behlulwa iqembu lasekhaya, kodwa usekela mqeqeshi, u-Wandile Gwavu ukholwa ukuthi abadlali bakutholile akade bekudinga kumdlalo.
“Siyayibonga i-Tuks cricket ngokusinika iqembu elinzima ukuthi sizivivinye, okokuqala,” kusho u-Gwavu. “Siyazi ukuthi uma bedlala umdlalo wekhilikithi badlalela ukunqoba, abazibambi futhi yilokho okade kudingwa iqembu lethu, amalungiselelo amahle.”
“Inhloso yomdlalo wanamhlanje ukwenza isiqiniseko sokuthi wonke umuntu uthola ithuba lokudlala futhi nabaphosayo bathole ithuba njengoba abanye bengaphosanga emasontweni amabili. Njalo ufuna ukunqoba, akunendaba ukuthi udlala umdlalo onjani, hlezi sizimisele kubona ngoba wakha umdlandla uma unemizwa yokunqoba.”
“Ngokusho lokho, iqembu likutholile okade likudinga emdlalweni. Njengeqembu elilungile, hlezi sibheka ukubangcono. Hayi namhlanje kuphela noma izinyanga ezimbili ezidlulile, kumayelana nezinyanga ezingu-18 zomsebenzi esiwenzile nabadlali futhi bonke bayayazi indima yabo nokuthi kulindelekeni kubona.”
i-South Africa ihlanganise u-272/7 emuva kwama-overs abo angu-50 emuva kokukhetha ukushaya kuqala, u-Jiveshen Pillay wathola ikhulu (117 off 127balls, 9 fours, 1 six) no-50 ka-Andile Mogakane (65 off 76 balls, 6 fours) no-Matthew Breetzke (63 off 76 balls, 6 fours). U-Donovan Ferreira uhlasele ngebhola waphuma phambili ngo-4/42 kwi-spell sakhe sama-overs angu-10.
u-Ivan Kriek wama-Tuks uthole ama-runs angu-130 emabholeni angu-134 (7 fours, 9 sixes) futhi esekelwe kahle u-Blake Schraader othole u-87 emabholeni angu-74 (9 fours, 2 sixes), bahola iqembu labo ekunqobeni. Abavula ngokuphosa, u-Thando Ntini no-Gerald Coetzee baphose kahle bathola u-2/20 no-2/24 ngokulandelana kwabo.
Iqembu lizoya kwi-World Cup kusasa (04 January) kwindiza yakwa-Emirates u-EK766 ngo-22:20.
u-Philander ubuyele emdlalweni u-De Villiers ukuphakamisela izithupha ukudlala ngebhola elibomvana Ama-wicket amahlanu ka-Morkel no-Maharaj anqobise ama-Proteas nge-innings Ikhulu lika-Markram nokuhlasela ngebhola elisha kwa-Morkel kubeka ama-Proteas ngaphambili u-Du Plessis uzophuthelwa i-Test ye-Zimababwe; u-De Villiers uzoba ukapteni u-De Villiers uyilungele inselelo yebhola elibomvana u-AB, u-Dale no-Vernon babuyile kwiqembu lama-Proteas le-Test u-Frylinck ubheke ukugcina izinto zilula enkundleni enkulu Ama-Proteas aqede ngokunqoba i-ODI series u-Du Plessis ukhishiwe kwi-KFC T20I series Kusafana nephupho – u-Mulder